Norway | Somaliska
Soomaali qaad ku raran oo lugu qabtay magaaladda Oslo ee dalka Noorweey
Garoonka diyaaradaha magaaladda Oslo ee dalkaasi Noorweey, waxaa lugu qabtay labbo nin oo soomaali ah kuwaas oo qaad ku soo daabulayey dalkaasi. Raggan oo maalintii axada gacanta lugu soo dhigay ayaa boolisku sheegeen in...
Maalintii shalay aheyd ayaa waxaa xaafadda Grönland ee dalka Noorwaay dabaqa sadexaad iska soo tuurtay haweeneey soomaali ah oo xaaladeeda caafimaad aad u liidato luguna dabiibayo cisbitaalka Oslo. Haddaba si aan u oggaano asbaabaha...
Xaafadda Grønland oo ah xaafad ay soomaalida iyo ajaanibta kale aad u degto ee magaaladda Oslo ee dalka Nooweey,ayaa waxaa dabaq dheer oo ku yaala iska soo tuurtay haweeneey soomaali ah. Haweeneydan oo dhaawac...
Weerar lugu qaaday iskuul ku yaala magaaladda Kristiansand ee koonfurta dalka Noorweey ayaa waxaa ku dhintay macalimad iyo arday soomaali ah, kuwaas oo u dhintay dhaawicii ka soo gaaray weerarkii mindida ee lugu dilay. Marxuumk soomaaliyeed...
Wiil soomaali ah oo mdaxa looga jiro oo aabihiis ku dilay Noorweey
Degmadda Asker, ee galbeedka ka xigtaa caasimadda Norway ee Oslo, ayaa fiidnimaddii xalay waxaa wiil soomaali ah ku dilay guri aabihiis oo ay ku wada noolaayeen guri. Wararka ay saxaafadda dalkaasi ka qoreen wiilkaan...
Nin soomaali ah oo horey xaaskiisa u dilay oo dhageeysiga dacwadiisa ka bilaabatay Noorweey
Maxkamad ku taala magaaladda Begen ee dalka Noorwaay ayaa maalintii shalay aheyd waxaa ka bilaabatay dhageeysiga dacwad lugu soo oogay nin soomali ah oo xaaskiisi sanadkii hore mindi ku dilay. Ninkan soomaaliga ah ayaa...
Iyadoo dowladda Noorweey ay kal hore sheegtay ineey sharciga daganaanshaha kala laabaneeyso soomaali gaareysa 1.600 oo, qof ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ee haatan xilkeeda dhamaatay xog ogaal u...
Dalka Norway ayaa wararka eeynu ka heleyno waxaa ay sheegayaan in ajaanib ay soomaalida ka mid tahay sharciggii dal ku jooga dalkaasi lagala noqday. Dadkaan sharciyada lagala noqday ayaa tiradooda gaareysa 800 00 qof,...
Dowlada Norway ayaa waxay wadahadal la yeelanatay wafdi uu hogaaminay wasiirka arimaha dibada Somalia Cabdisalaam Cumar Hadliye kaasoo arinta ugu weyn ee lagala hadlayo ay tahay in ay dowlada Somalia saxiixdo heshiis dib loogu...
Dowlada Norway ayaa baasaboorka ka ceshatay dhowr qof oo Soomaali ah kuwaasoo lagu amray in ay wadanka isaga baxaan si degdeg ah. Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa Norway waxay baaritaan ku haysay...
Kowdii bishan aan ku guda jirno ee April sanadkan 2016 ayaa wasiirada arimaha soo galootiga wadanka Norwey naagta lagu magaacabo Sylvi Listhaug soo rogtay go aan cusub oo ah in dadka qaxootiga ah ee magangalyada...
Halkaan ka daawo muuqaal xiiso badan oo ay soo diyaariyeen asxaabteena Midnimo TV kuwaasoo baaritaan ku sameeyay Soomaalida ay caruurtooda ka qaadatay dowlada Norway. Waxay sidoo akle baaritaan ku sameeyeen guud ahaan nolosha qurba-joogta...